Karazana varotra isan-karazany amin'ny varotra Affiliate | Fifamoivoizana hiara-miasa
Arovy ny fivezivezena kendrena hiaraka amin'ny programa marketing
Manaova SEO, marketing amin'ny atiny, fikarohana amin'ny mpifaninana,
PPC sy marketing amin'ny media sosialy amin'ny sehatra tokana.
Mahazo vaomiera iray izahay raha tsindrio ity rohy ity ary mividy fa tsy andoavam-bola fanampiny ho anao.
by Beverly Little on Enga anie 22, 2021
Karazana varotra varotra isan-karazany
Rindrambaiko fianarana fiteny Babbel - Mianara miteny Espaniôla, frantsay, anglisy ary maro hafa - Fiteny 14 hisafidianana - Mifanaraka amin'ny iOS, Android, Mac & PC (Famandrihana 12 volana)
09/24/2021 10:49 maraina GMT
Ny tombotsoan'ny marketing Affiliate dia miavaka kokoa ankehitriny noho ny teo aloha. Ity dia iray amin'ireo singa voalohany amin'ny fampiantsoana mafy programa marketing marketing amin'ireo mpivarotra Internet an-tserasera marobe.
Ny fanavaozana ny tranokala vaovao indrindra dia nahatonga ny fahazoan'ireo mpivarotra an-tserasera fidiram-bola hahazo ny statistikan'izy ireo sy ny tarehimarika azony amin'ny minitra amidiny am-barotra. Azo atao izao ny mampiasa orinasa toa ny PayPal handoavana ny vola sy ny fikarakarana faktiora. Tena nanapaka tokoa ny fotoana ilain'ny mpivarotra an-tserasera amin'ny fiandrasana ny fandoavam-bolany hangonina avy amin'ireo mpivarotra.
Na ny mpiara-miasa na ny mpivarotra dia samy efa nahatakatra fa ny marketing marketing dia miasa ho azy roa. Ireo mpivarotra dia mihevitra ny marketing marketing ho toy ny vintana hampiroborobo ny entany amin'ny vola kely lavitra. Etsy ankilany, ireo mpiara-miasa dia mahita ny marketing marketing ho toy ny fomba mahomby amin'ny fanaovana fidiram-bola amin'ny Internet amin'ny fanaovana zavatra tian'izy ireo indrindra, dia ny famoahana tranonkala.
Raha toa ny fampakarana ny marketing marketing izay niditra an-tsokosoko tokoa, dia toy izany koa ny fomba fijerin'ny olona iray izay nanova ny tsara kokoa momba ny marketing marketing. Ny marketing Affiliate dia tsy heverina ho fomba faharoa amin'ny marketing an'ny mpivarotra, na ho loharanom-bola fanampiny avy amin'ny mpivarotra an-tserasera. Ho an'ny mpiara-miasa sy mpivarotra, ny marketing marketing dia heverina ho loharanom-bola sy tombony voalohany.
Izahay izao dia mitaky ny hijerena izay karazana marketing Affiliate mety tsara indrindra ho an'ny olona tsirairay? Misy mampiavaka ny programa marketing marketing?
Tena misy ny laharan'ny marketing marketing, ary ny karazany dia hiankina amin'ny fomba hanasokajinao azy ireo. Ny sokajy lehibe amin'ny programa marketing marketing dia ao anatin'ny sokajy 2: pay-per-click (PPC), ary pay-per-performance (PPP).
Pay Per Click (PPC) - PPC no karazana varotra Affiliate malaza indrindra ho an'ireo mpiara-miasa amin'ny tranokala kely, ary azo inoana fa ny fomba mety indrindra ahafahan'izy ireo mahazo vola. Amin'ity karazana marketing marketing ity dia mandoa ny mpiara-miasa aminy ny mpivarotra isaky ny mitsidika ny tranonkalany ny mpitsidika, izany hoe isaky ny misy olona manindry ny sahan'ny mpivarotra na ny doka an-tsoratra.
Pay Per Performance (PPP) - Ny varotra Affiliate PPP dia ankafizin'ny mpivarotra ary koa ny karazana mahafa-po indrindra ho an'ireo mpiara-miasa aminy. Amin'ity karazana programa afiliana ity dia mandoa ny mpiara-miasa ny mpivarotra raha vao miova ho hetsika ny tolo-keviny - isaky ny mpitsidika izay notondroiny dia mividy zavatra avy amin'ny tranonkalan'ny mpivarotra na rehefa lasa mpitsidika ilay mpitsidika. Etsy ankilany, ity karazana marketing marketing ity dia miafara amin'ny fanomezana fahafaham-po ara-toekarena ho an'ny mpiara-miasa akaiky, satria ny komisiona amin'ny marketing PPP Affiliate dia mazàna amin'ny 15% ka hatramin'ny 20% amin'ny tena varotra entana.
VAKIO IZANY Ahoana ny fisafidianana sora-baventy ho an'ny tranonkalanao
Ny marketing Affiliate pay-per-fampisehoana dia azo sokajiana amin'ny karazany 2: pay-per-sales (PPS) sy pay-per-lead (PPL). Samy malaza be ireo.
a) Pay Per Rent (PPS) - Amin'ny marketing marketing Affiliate isan-karama, mandoa vola manokana amin'ny mpiara-miasa ny mpivarotra isaky ny mitsidika ny tranokalan'ny mpivarotra izy raha ny marina mividy zavatra amin'ny tranonkalan'ny mpivarotra. Ny mpiara-miasa dia matetika aloa amin'ny komisiona, na dia ny mpivarotra hafa aza dia manapa-kevitra ny handoa ny sarany. Na inona na inona ny fototry ny fiampangana, dia mazàna lehibe kokoa noho ny vola aloa amin'ny mpiara-miasa amin'ny programa Affiliate pay-per-click.
Amin'ity karazana marketing marketing ity dia omena ny mpiara-miasa isaky ny mpitsidika niresaka momba ny tranokalan'ny mpivarotra dia nameno karazana fampiharana na karazana mitovy amin'ny orinasa misy ny orinasa. Ankoatr'ireo karazana marketing marketing 3 manokana ireo dia misy karazana marketing marobe hafa. Raha mifototra amin'ny halalin'ny tambajotram-pifandraisana ity sokajy ity dia azo sokajiana ho marketing tokana, ambaratonga roa, ary ambaratonga marobe.
Fivarotana Affiliate tokana, roa ambiny ary maro karazana
Ireo karazana marketing marketing ireo dia miankina amin'ny ambaratonga na ambaratonga isan-karazany ao amin'ny tambajotram-pifandraisana izay andoavana ny vola.
A) Tier tokana - Ao anatin'ny programa marketing marketing iraisana tokana, ny karamaina dia omena vola arakaraka ny varotra mivantana na fifamoivoizana izay nofaritany momba ilay mpivarotra. Ireo karazan-tsena rehetra momba ny varotra taloha (ie PPS, PPL, ary PPC) dia tafiditra ao anatin'ny sokajy tokana.
B) Roa Tier - Ao anatin'ny programa marketing marketing misy ambaratonga roa, ireo mpiara-miasa dia tsy laniana amin'ny fifamoivoizana mivantana na ny varotra omeny ny tranokalan'ny mpivarotra, na izany aza amin'ny fifamoivoizana na fivarotana rehetra atolotry ny mpiara-miasa hafa izay nanao sonia azy mpiara-miasa amin'ilay mpivarotra an-tserasera etsy ambony.
C) Multi Tier - Ny marketing marketing Affiliate multi-tier dia miasa amin'ny fomba mitovy amin'izany, na dia mahazo komisiona fanampiny ho an'ny ambaratonga maro isan-karazany amin'ny sehatra isan-karazany ao amin'ny tambajotram-pifandraisana aza.
D) Marketing marketing Affiliate fidiram-bola - Amin'ity karazana ity, ankoatry ny fanaovana Affiliate ny vola ho an'ny mpanjifa tsirairay nofaritany ny tranokalan'ny mpivarotra, dia omena vola koa ny mpiara-miasa isaky ny miverina amin'ny tranokalan'ny mpivarotra izy ary mividy entana hafa. Ny komisiona ho an'ny marketing marketing toy izany dia miankina amin'ny ampahany amin'ny varotra na miankina amin'ny vola namboarina.
Ny mpivarotra an-tserasera rehetra dia mahita fa ireo teknika marketing isan-karazany ireo dia miasa amin'ny fomba hafa amin'ny tsirairay amin'izy ireo. Ny marketing marketing multi-level, antsoina koa hoe Multi-Level Marketing (MLM) dia karazana marketing an-tranonkala mafy dia mafy ary tsy mety amin'ny rehetra izany. Raha ny marina dia mpivarotra an-tserasera marobe no mieritreritra ny MLM ho voarara na zavatra tsy mahasoa.
Ny mpivarotra an-tserasera dia mila manandrana teknika isan-karazany ary misafidy izay mety aminy indrindra. Avy eo izy dia tsy maintsy mifantoka amin'ireo teknika ara-barotra miaraka aminy izay mifanentana amin'ny volavolan'ny serivisy marketing an-tserasera.
Tahaka ny nahatongavan'ny antso an-tariby ho an'ny marketing afiliana ho lasa overdrive, dia toy izany koa ny fomba fijerin'ny olona iray izay nanova ny tsara kokoa momba ny marketing marketing. Ny marketing Affiliate dia tsy heverina ho fomba faharoa amin'ny marketing an'ny mpivarotra, na ho loharanom-bola fanampiny avy amin'ny mpivarotra an-tserasera. Ho an'ny mpiara-miasa sy mpivarotra, ny marketing marketing dia heverina ho loharanom-bola voalohany sy karama.
Etsy ankilany, ity karazana marketing marketing ity dia miafara amin'ny fahafaham-po ara-toekarena indrindra ho an'ny mpiara-miasa akaiky, satria ny komisiona amin'ny marketing PPP Affiliate amin'ny ankapobeny dia misy eo amin'ny 15% ka hatramin'ny 20% amin'ny tena varotra entana. Ankoatr'ireo karazana marketing marketing 3 manokana ireo dia misy karazana marketing marketing hafa.
Mizara amin'ny Email
KYNG Portable Power Station 540wh Solar Generator Backup Lithium Battery Pure Sine Wave AC Outlet, tampon'ny 1000w, famatsiana herinaratra vonjy taitra, CPAP, ivelany, toby, Generator azo entina azo averina azo averina
Filed Under: Fandaharana Marketing Affiliate
Rafitra fitsaboana ny rivotra
Amazon Prime Sary nahazoan-Card
Kyng Portable Solar Generator
WordPress Ho an'ny Beginner's 2021
Ny tsara indrindra amin'ny fiainana
Fandaharana Marketing Affiliate
Balety misy sora-baventy
Fahasalamana sy fahasalamana
Trano amidy any Illinois
Amboary ny Downlines-ko
Salelist Mailer maimaim-poana
Tanisao i Joe
Lisitra ny valanaretina
State of Art Mailer
Mitarika fidiram-bola 2 ny fifamoivoizana
Ny lisitra SEO
Serivisy fandefasana hafatra
Rafitra fitsaboana ny rano
Fampiroboroboana ny tranokala
Fanohanana an-tserasera WP
Politika fanoherana ny spam
Fanamarihana momba ny zon'ny mpamorona
Fanarahana ny DMCA
Filazana ny haino aman-jery sosialy
Lahatsoratra nalefan'i Recents
Ahoana ny fomba hahatratrarako ny fifamoivoizana amin'ny bilaogiko? Fantatrao ny…
Ny fiakarana sy ny fisondrotan'ny bilaogin'ny mpitsidika - Fantaro ny fomba hanampiny anao…
Fomba maro kokoa hikendrena ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao
Tokony hividy fifamoivoizana kendrena ve ianao?
Fifamoivoizana kendrena amin'ny alàlan'ny media sosialy
Torohevitra lehibe hitarihana ny fifamoivoizana amin'ny raharaham-barotra amin'ny Internet…
Fifamoivoizana amin'ny tranokala
Inona no azon'ny plugins WordPress atao aminao?
Sarotra ny mahazo ny môdely WordPress?
Ahoana ny fomba ahazoana fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny fifanakalozana fifamoivoizana
Fifamoivoizana kendrena no zava-miafina amin'ny varotra tsara!
Ahoana ny fisafidianana sora-baventy ho an'ny tranonkalanao
Ahoana no ataoko mifantoka amin'ny fifamoivoizana amin'ny bilaogiko?
Fomba bebe kokoa hikendrena ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao
Fifamoivoizana kendrena maimaimpoana ho an'ny rafitra
Torohevitra lehibe hitarihana ny fivezivezena amin'ny raharaham-barotra amin'ny Internet…
Fitaovana fifamoivoizana kendrena amin'ireo programa marketing ho an'ny Affiliate
Hiverina any an-tampon'ny pejy
Copyright © 2021 · Lohahevitry ny zaza Copyblogger on Framework Genesis · WordPress · Hiditra
Fanomanana hetra VIP - Mandrosoa hatramin'ny 6000 $
Hamantatra bebe kokoa5 Star Review
Mandany vola kely kokoa, ambany - fidirana amin'ny tranokala Amazon izao
Ankafizo ny tsara indrindra amin'ny fiainana - vokatra azo antoka izay mifanaraka amin'ny fomba fiainanao
Amin'ny fanohizanao ny fijerena ilay tranonkala no ekena fa mampiasa ny cookies izahay